Abahlinzeki bemikhiqizo neFektri - Abakhiqizi bemikhiqizo yaseChina - Ingxenye 2
I-fiber engenalutho i-hemodialyzer (...
Isihlungi esiqondile sokukhanya ukumelana nokumiswa okusethiwe
Lo mkhiqizo usetshenziswa kakhulu ekumelweni komtholampilo kwezidakamizwa ezijwayele ukonakala kwe-photochemical kanye nemithi elwa nesimila. It is ikakhulukazi efanelekayo ukumnika emitholampilo umjovo paclitaxel, umjovo cisplatin, umjovo aminophylline futhi sodium nitroprusside umjovo.
Ukumiswa kokumelana okukhanyayo okukhanyayo
Ukumnika kusethelwe ukusetshenziswa okukodwa (i-DEHP mahhala)
"Izinsiza zamahhala ze-DEHP"
Isethi yokumnika engenayo ye-DEHP isetshenziswa uhla olubanzi lwabantu futhi ingalisusa ngokuphelele isethi yokumnika okungokwesiko. Izinsana ezisanda kuzalwa, izingane, intsha, abesifazane abakhulelwe, abesifazane abancelisayo, iziguli ezindala nezigulayo neziguli ezidinga ukumenyezelwa isikhathi eside zingayisebenzisa ngokuphepha.
Eqondile isihlungi ukumnika isethi
Ukungcoliswa kwezinhlayiya ezinganakiwe ekufakelweni kungavinjelwa.
Ucwaningo lwezemitholampilo luye lwafakazela ukuthi ingxenye enkulu yokulimala komtholampilo okubangelwa ukusethwa kokungeniswa kubangelwa yizinhlayiya ezingenakunyibilika. Enkambisweni yokwelashwa, izinhlayiya eziningi ezincane kune-15 μm zivame ukukhiqizwa, ezingabonakali ngeso lenyama futhi ezinganakwa kalula ngabantu.
I-TPE isethi yokufakwa kokuhlunga okuqondile
Isakhiwo se-membrane auto ukumisa ukumnika uketshezi kuhlanganisa imisebenzi yokumisa okuzenzakalelayo noketshezi lwezokwelapha imisebenzi. Uketshezi lungamiswa ngokuqinile noma ngabe isikhundla somzimba sishintshwe ngokweqile noma ukumiliselwa kukhushulwa ngokungazelelwe. Ukusebenza kuyahambisana, futhi kulula kakhulu kunalokho kwamasethi wokumnika ajwayelekile. Isakhiwo se-membrane auto stop fluid infusion set isencintisana kakhulu futhi inamathemba angcono emakethe.
Misa ngokuzenzakalela isethi yokumnika isihlungi samanzi eqondile (i-DEHP mahhala)
Misa ngokuzenzakalela ukumiswa kokufakwa kwesihlungi esiqondile
Inaliti yomjovo we-hypodermic alahlwayo yakhiwa ngesiphathi senaliti, ishubhu lenaliti nomkhono wokuvikela. Izinto ezisetshenzisiwe zihlangabezana nezidingo zezokwelapha futhi zenziwa inzalo yi-ethylene oxide. Lo mkhiqizo u-aseptic futhi awunayo i-pyrogen. ilungele i-intradermal, subcutaneous, imisipha, umjovo we-vein, noma ukukhishwa kwemithi ketshezi ezosetshenziswa.
Ukucaciswa kwemodeli: Kusuka ku-0.45mm kuye ku-1.2 mm
Isiponji esingenasidingo somoya
Umthamo womjovo ulungiswa ngentambo yokunemba, nephutha ledosi lingcono kunalelo lesirinji eqhubekayo.
Inaliti uhlelo lomjovo
Injection Umjovo ongenabuhlungu wokunciphisa ingcindezi engokwengqondo yeziguli;
Technology Ubuchwepheshe obusakazwayo obuncane bokuthuthukisa izinga lokumunca izidakamizwa;
Injection Umjovo ongenaliti ukugwema ukulimala kwenduku kwabasebenzi bezokwelapha;
Ect Vikela imvelo futhi uxazulule inkinga yezokwelapha yokuphinda isebenze kabusha yamadivayisi omjovo wendabuko.
Izirinji ezilahlwa yizidakamizwa ziyimikhiqizo esetshenziswa kabanzi ekhaya naphesheya. Emsebenzini wangempela womtholampilo, abasebenzi bezokwelapha kudingeka basebenzise imijovo emikhulu kanye nezinaliti zomjovo ezinosayizi omkhulu ukukhipha iziphuzo zemithi. Ama-solvents aseptic alahlwayo akhiqizwa yinkampani yethu imijovo yezokwelapha asetshenziswe kabanzi emtholampilo, futhi izinzuzo zenhlalo nezomnotho zibalulekile. Isirinji yokuqedwa kwezidakamizwa kudingeka ukuthi ingabi nobuthi futhi iyinyumba, ngakho-ke ikhiqizwa futhi ihlanganiswe kumhlangano wokusebenzela onamazinga ayi-100,000. Umkhiqizo uqukethe isipontsho, inaliti yokujola yezidakamizwa, nekhava evikelayo. Ijakhethi yesirinji kanye nenduku yomgogodla yenziwe nge-polypropylene, kanti i-piston yenziwe ngenjoloba yemvelo. Lo mkhiqizo ulungele ukupompa nokujova umuthi ketshezi lapho uqeda umuthi. Ayiwulungele umjovo we-intradermal womuntu, owangaphambi kwesikhumba kanye nowangaphakathi.
Isirinji ye-insulini yehlukaniswe nomthamo wokuqokwa ngomthamo wokuqamba: 0.5mL, 1mL. Izinaliti ze-injector zama-insulin syringe ziyatholakala ku-30G, 29G.
Isirinji ye-insulin isuselwa kumgomo we-kinetic, kusetshenziswa ukungena kokuphazanyiswa kwenduku yomgogodla kanye nomkhono wangaphandle (nge-piston), ngokudonswa kanye / noma ngamandla okucindezela akhiqizwe ngesenzo somuntu, ukufuna imitholampilo yomuthi ketshezi kanye / noma umjovo yemithi ewuketshezi, ikakhulukazi yokujova ngomtholampilo (isiguli esincishwayo, umjovo wokujova ngemithambo yegazi), ukuvimbela ezempilo nobhubhane, ukugoma, njll.
Isirinji ye-insulin ingumkhiqizo oyinyumba ohloselwe ukusetshenziswa wodwa kuphela futhi oyinyumba iminyaka emihlanu. Isirinji ye-insulini nesiguli kungukuxhumana okuhlaselayo, kanti isikhathi sokusebenzisa siphakathi kwemizuzu engama-60, okuwukuxhumana okwesikhashana.
<< <Langaphambilini 12345 Okulandelayo> >> Ikhasi 2/5